Snapdragon 810 ga-abụ mgbawa nke ọhụrụ Sony Xperia Z4 | Gam akporosis
Ọ bụ ezie na anyị ga-echere oge ọkọchị Iji mata flagship ọhụrụ nke Sony na saịtị ahụ, taa anyị matara na ọ nwalere site na weebụsaịtị Geekbench.
Geekbench depụtara ihe omimi Sony nke di omimi Ọ na-arụ ọrụ n'okpuru gam akporo 5.0.2 Lollipop ma ọ nwere mgbawa octa-core Qualcomm MSM8994, kpomkwem ama Snapdragon 810. Ngwaọrụ ọhụrụ nke anyị nwere nwee ike ịhụ asịrị nke ọzọ rue mgbe anyị nụrụ akụkọ ahụ na ọbịbịa ya maka oge ọkọchị na-agafe MWC 2015, ngosi ebe a tụrụ anya ọnụ ahịa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ndị Japan.
1 Qualcomm ekwenyelarị Snapdragon na Xperia ọhụrụ
2 Versionsdị abụọ dị iche iche
Qualcomm ekwenyelarị Snapdragon na Xperia ọhụrụ
Qualcomm ekwenyeworị na anyị ga-ahụ mgbawa Snapdragon 810 na ngwaahịa Sony na-esote, na kpomkwem Xperia Z4 ọhụrụ ahụ ga-abụ onye mbụ jiri ya rụọ ọrụ iji nye ndị ọrụ ya ọrụ zuru oke. Maka nke a, ọ ga - esote na njedebe a hụrụ na Geekbench nwere ike ịbụ Z4 ọhụrụ, ọ bụ ezie na ọ nwekwara ike ịbụ mmejọ.
N'etiti nkọwa ndị ọzọ na-egosi na weebụsaịtị a, a na-atụ aro ya Sony Xperia Z4 ohuru ga - enwe 3 GB nke RAM. Ihe ezi uche dị na aka nke ọzọ na nke anyị na-ahụ na-eduga ekwentị na ọnwa ndị a.
Versionsdị abụọ dị iche iche
Otu n'ime asịrị na nso nso a na anyị chere ihu na izu ndị a gara aga bụ na ọ nwere ike ịbụ na Xperia Z4 ọhụrụ ahụ ga-apụta na nsụgharị abụọ, onye nwere Quad HD mkpebi (1440 x 2560 pikselụ) na onye ọzọ nwere ihuenyo 1080p. Esemokwu ndị a na-abịa ka onye ọrụ nwee ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na ha ahọrọ ịrụ ọrụ batrị ka mma, ma ọ bụ na aka nke ọzọ, ihuenyo ka mma. Anyị nwere ike ịhụworị na nke a maka batrị ka mma emeela ka Xperia Z3 na Z3 Compact bụrụ ndị ọnụ ahịa abụọ na-atọ ụtọ nke ndị obodo gam akporo nabatara.
Ọ dị ezigbo mma na ha na-enye QuadHD ihuenyo, mana n'oge eziokwu ịnwe elekere ole na ole nke batrị nwere ike ịbịaru ọtụtụ ọnọdụ na ọtụtụ nde ndị ọrụ ga-eche ihu kwa ụbọchị. Gịnị na-anọgide na-enweghị obi abụọ bụ na usoro nke Xperia Z4 na nnukwu batrị, 810 Snapdragon mgbawa na mkpebi 1080p bụ ihe ama ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony » Sony Xperia Z4 gafere n'aka Geekbench na Snapdragon 810
LG G3 VR: LG iko eziokwu ga-adị na ọnwa na-abịa n'efu maka ndị zụrụ LG G3